Izinto eziluncedo - Shineon Technology Co., Ltd.
Sebenzisa iresiphi ephambili ye-phosphor kunye neetekhnoloji zokupakisha, uShineon wayevelise iimveliso zothotho lwee-LED ezintathu. Itekhnoloji iyasivumela ukuba senze injineli kwaye sivavanye ukusasazwa kwamandla ombane we-SPD ye-LED emhlophe, ukuze sifumane umthombo olungileyo wokukhanya ofanelekileyo kwizicelo ezahlukeneyo.
Uphando lubonakalise unxibelelwano phakathi kombala wemithombo yokukhanya kunye nomjikelezo womntu ojikelezayo.
Ubungakanani be-UV buvela kwi-10nm ukuya kwi-400nm, kwaye yahlulahlulwe yangamaza eyahlukeneyo: indawo emnyama ye-UV curve ye (UVA) kwi-320 ~ 400nm; Imitha ye-Erythema ye-ultraviolet okanye yokhathalelo (UVB) kwi-280 ~ 320nm; I-Ultraviolet sterilization (UVC) kwi-200 ~ 280nm band; Kwigophe le-ozone ye-ultraviolet (D) kwi-180 ~ 200nm wavelength.
Ukusetyenziswa kweShineon kwetekhnoloji ephezulu yokupakisha i-hermetic, ukuyila uthotho lomthombo wokukhanya kwe-LED kulimo lwezityalo. Enye luchungechunge lwephakheji ye-monochrome isebenzisa i-chip ebomvu nebomvu (i-3030 kunye ne-3535 uthotho), kwaye enye luthotho lwe-phosphor uchulumancile yi-blue chip (3030 kunye ne-5630 uthotho). Uthotho lokukhanya kwemonochromatic lunenzuzo yokusebenza ngempumelelo kweefoto ephezulu
Njengombhalo wenoveli nano, amachaphaza e-quantum (QDs) anokusebenza ngokugqwesileyo ngenxa yobungakanani bawo. Ubume beli nqaku bu-spherical okanye i-quasi-spherical, kwaye ububanzi balo buqala kwi-2nm ukuya kwi-20nm. Ii-QDs zinezibonelelo ezininzi, ezinje ngobumnandi obubanzi, ukungcola okuxineneyo, ukuhamba okukhulu kweStoke, ixesha elide lobomi be-fluorescent kunye nokulunga
Umbala ophezulu webala
Ngophuhliso lobuchwephesha bokubonisa, ishishini le-TFT-LCD, eliye lalawula imboni yokubonisa amashumi eminyaka, icelwe umngeni kakhulu. I-OLED ingene kwimveliso yobuninzi kwaye yamkelwe ngokubanzi kwicandelo lee-smartphones. Iitekhnoloji ezivelayo ezinje ngeMicroLED kunye neQDLED zikwindawo egcweleyo.